Ilaa Hadda doodu waxay kusocotaa Dariiqii Qodxaha badnaa. | ogaden24
Ilaa Hadda doodu waxay kusocotaa Dariiqii Qodxaha badnaa.
Feb 13, 2019 - Aragtiyood
Haddaad isha la raac-raacdo doodaha baraha bulshada ka socda tiir dhexaadkoodu waa laba shay oon mid saddexaad lahayn; waa Qabyaalad iyo Far-isku-fiiq (Jaajuusnimo).
Nin Oday dhaqan iyo diimeed ahaa ayaa yidhi: “Sagaaro saw ima barato!.” (Mindhaa waligii dhagax kumuuna tuurin maalin walbana way ka carartaa sidii isagoo Dugaag ama kuraygii Hilbaha jeclaa kamida).
Eegga, taa lidkeeda reer soomaaligalbeedoow saw qabyaalad iyo far-isku-fiiq (jaajuusnimo) foolxumadooda kama ilbaxdaan?!.
Waa halkii dhaan-wadee dhawr arrimood oo sida cad-ceeddaas iigu muuqda aan idinla wadaago:-
1. Reer Soomaaligalbeedoow Itoobiya isma beddeline way xuub dhacsatay!. Noolaha Maska la yidhaahdo saw mataqaaniin? Masku hadduu xuub dhacsado macnaheedu ma inuu Mulac ama jiir isu beddelaybaa mise waa inuu dib u cusboonaaday?; khatar Dhuleed, mid Diimeed, mid Dhaqan, mid Dhaqaale, mid Amni iyo mid jiritaan intaba daruurahoodu way idin dul hoganayaan.
2. Reer Soomaaligalbeedoow waxaad maanta qabsan waydaan waligiin oo dambe qabsan maysaan (Allow yeyna dhicin inaan maanta iyo berri midna waxba qabsan wayno), sababta aan sidaas u leeyahay miyaydun iwaydiin?.
Iskaba sahlane, Yaa idiin maqan maanta ood wax ka sugaysaan horta? Jabhaddee? Kooxdee? Qofkee magac leh?.
Saw maanta kulligiin Jigjiga islama joogtaan?; Xornimadoonkiinnii, xuquuq-raadiskiinnii, aqoon-yahankiinnii, indheer-garadkiinnii, maamulkiinnii iyo shacabkiinnii?. Waliba saw fursad dahabi ah oo halkii qarniba hal mar timaadda ama aan imaninba idinma hortaallo?.
3. Reer Soomaaligalbeedoow cadowgiinnu wuxuu idiin yaqaannaa ‘SOOMAALI’, sababtoo ah waxaad tihiin Soomaali!.
Kulligiin waxaad saaran-tihiin hal Doon ah. Sidaa daraadeed ama waydun wada bad-baadi ama waydun wada qarqoomi laakiin dhici mayso in Qoys ama gobalna tanaado mid kalana tiiraan-yo ku noolaado. Waa tuma hooyada foolan ee haddana indhaheedu seexdaan?!.
Gaba-gabadii, waxaan idin leeyahay: Midnimo ku difaacda waxaa yar ee aad haysataan; waxa-wayn ee idinka maqanna midnimo ku doonta.
Bye: Ismaciil Cali Ismaaciil